Vanhu vanobvuma kuchengeta sungano (1-11)
Mozisi muGomo reSinai (12-18)
24 Akabva ati kuna Mozisi: “Kwirai kuna Jehovha, iwe naAroni, Nadhabhi naAbhihu,+ nevakuru vaIsraeri 70, mukotame muri nechekure. 2 Mozisi anofanira kuswedera kuna Jehovha ari ega; asi vamwe havafaniri kuswedera, uye vamwe vanhu vese havafaniri kukwira naye.”+ 3 Mozisi akabva auya akaudza vanhu mashoko ese nemitongo yese yakapiwa naJehovha,+ vanhu vese vakapindura nenzwi rimwe chete, vachiti: “Tinobvuma kuita zvese zvataurwa naJehovha.”+ 4 Saka Mozisi akanyora pasi mashoko ese aJehovha.+ Akabva afumomuka, akavaka atari mujinga megomo uye akamisa matombo 12 aienderana nemadzinza 12 aIsraeri. 5 Pashure paizvozvo akatuma majaya evaIsraeri, uye vakapa zvibayiro zvinopiswa, vakabayira mikono yemombe kuti ive zvibayiro zverugare+ kuna Jehovha. 6 Mozisi akabva atora hafu yeropa racho, akaisa mumidziyo, uye imwe hafu yeropa racho akasasa paatari. 7 Akabva atora bhuku resungano, akariverengera vanhu.+ Uye vakati: “Tinobvuma kuita zvese zvataurwa naJehovha, uye tichamuteerera.”+ 8 Saka Mozisi akatora ropa, akarisasa pavanhu,+ akati: “Iri ndiro ropa resungano yaitwa naJehovha nemi maererano nemashoko ese aya.”+ 9 Mozisi naAroni, Nadhabhi naAbhihu, nevakuru vaIsraeri 70 vakakwira, 10 vakaona Mwari waIsraeri.+ Pasi petsoka dzake pakanga pakaita sepakawaridzwa matombo esafaya uye pakachena sedenga.+ 11 Haana kuuraya varume vanokudzwa vevaIsraeri,+ uye vakaona Mwari wechokwadi muchiratidzo, vakadya, vakanwa. 12 Jehovha akazoti kuna Mozisi: “Kwira kuno kwandiri pamusoro pegomo, woramba uripo. Ndichakupa mahwendefa ematombo nemutemo nemurayiro zvandichanyora kuti vazvidzidze.”+ 13 Saka Mozisi akasimuka aine mubatsiri wake Joshua,+ uye Mozisi akakwira mugomo raMwari wechokwadi.+ 14 Asi akasiya ati kuvakuru: “Timirirei pano kusvikira tadzoka.+ Muna Aroni naHeri.+ Munhu wese anenge aine nyaya inoda kutongwa ngaaende kwavari.”+ 15 Mozisi akabva akwira mugomo parakanga rakafukidzwa negore.+ 16 Kubwinya kwaJehovha+ kwakaramba kuri paGomo reSinai,+ uye gore rakarifukidza kwemazuva matanhatu. Pazuva rechinomwe akazoshevedza Mozisi ari mukati megore. 17 KuvaIsraeri vaiona, kubwinya kwaJehovha kwaiita semoto unoparadza uri pamusoro pegomo. 18 Mozisi akabva apinda mukati megore, akakwira pamusoro pegomo racho.+ Uye Mozisi akaramba ari pamusoro pegomo mazuva 40 neusiku 40.+